Barnaamijyada iyo barnaamijyada - Ikkaro
Aynu ka hadalno Software-ka. Sida wax loo qabto iyo sida dhibaatooyinka loo xaliyo. Dhibaatada Windows, Linux. Casharrada Gimp iyo aaladaha kale sida mashiinnada farsamada, iwm, iwm.
Waxaan isticmaalnaa nidaamyada hawlgalka iyo barnaamijyada maalin kasta. Marar badan dhibaatooyin ayaa soo ifbaxa oo aynaan garanayn sida loo xalliyo mararka qaarna innaga ayaynu ku abuuri karnaa innaga oo aan si sax ah wax u qabanayn.
Hubso inaad kumbuyuutarka ku isticmaasho shaqadaada, ma heshaa waxqabadka saxda ah? Miyaad haysaa waxqabadyo la hagaajiyay ama wax badan oo ka badan ma sameyn kartaa otomaatiga? Waxaa hubaal ah inay jiraan aalado kuu oggolaanaya inaad kordhiso waxsoosaarka, ama xoogaa isbeddel ah uu ku yimaado ama habka aad u maamusho
Hagaag, waxaan arki doonnaa tabaha iyo casharrada dhammaan waxyaalahan oo kale.
Mararka qaarkood waxaan rabnaa inaan socod ku marno annagoo iska dhigeyna inaan joogno dal gaar ah, taas oo ah, qarinta IP-ga dhabta ah iyo adeegsiga mid kale oo ka socda waddanka aan dooranno.
Waxaa laga yaabaa inaan dooneyno inaan tan u sameyno sababo badan awgood:
caleenta adigoon is aqoonin,
adeegyada la bixiyo oo keliya haddii aad ka soo safarto waddan cayiman,
waxay bixisaa markaad shaqaaleyneyso
hubi sida websaydh ka kooban walxo juquraafi u shaqeeya.
Xaaladdayda waxay ahayd ikhtiyaarkii ugu dambeeyay. Ka dib markii aan hirgaliyay dhowr shey oo ku jira websaydhka WordPress, waxaan u baahanahay inaan hubiyo inay u muujineyso xogta si sax ah isticmaaleyaasha waddan kasta.
Soo ogow sida loogu ordo terminaalka iyo laba-gujinta
ka faylasha leh kordhinta .sh waa feylal ay kujiraan qoraallo, amarro luuqad bash ah, oo ku shaqeeya Linux. SH waa qolof Linux ah oo u sheegaya kombiyuutarka waxa la qabanayo.
Si aan u dhihi karno waxay la mid noqon doontaa Windows .exe.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo maamulo. Waxaan sharraxayaa 2. Mid ka mid ah terminaalka iyo kan kale oo leh garaafka garaafka, taas oo ah, jiirka, in markii aad laba-jibbaarto la fulinayo. Waxaad ka arki kartaa fiidiyowga hoostana waa tallaabo tallaabo loogu talagalay kuwa doorbidaya casharrada dhaqameed.
Aragtidayda ugu horreysa ee Ubuntu
Waxaan isticmaalayay Ubuntu laba toddobaad. Kadib markii aan maqaalka ku dhajiyay sida loo isticmaalo ubuntu USB-ga Waxaan go'aansaday inaan ku rakibo wada daaqadaha 7.
Rakibaadda oo aad u fudud, isla isla USB-ga ah, ayaa kaligiis ka dhigay qaybo, oo 3 ama 4 guji si ay u shaqeeyaan ka dibna layaabkii ayaa timid.
Ubuntu Linux ka isticmaal USB
Toddobaadkan dhammaadkiisu wuxuu ahaa wiig madow marka ay timaado kombuyuutarka. Dhibaatooyin badan kadib, windows-kayga vista ayaa go’aansaday inaan joojiyo shaqada.
Kadib markii aan dhowr formatting-rakibidda-formatting-rakibida, waxay umuuqataa in Windows 7 dhegeysanayo waxa aan dhahayo, inkasta oo aan wali haysto badh disk adag oo leh macluumaad aan la tirtirin.
Marka waxaan go'aansaday inaan isku dayo ikhtiyaarro kale, oo loo maro qaybinta Linux. Bogga ee Ikkaro oo ka socda Facebook, Waxaa laygula taliyay Ubuntu, oo aan horey waxbadan uga maqlay.